NY Fiainana Kristiana mifanraka amin'ny filazantsara
"Ary farany, ry rahalahy, mangataka aminareo sy mananatra anareo ao amin’i Jesosy Tompo izahay, mba ho araka ny nandraisanareo taminay izay mety handehananareo sy hanaovanareo ny sitrapon’Andriamanitra - dia araka ny andehananareo ihany - no hitomboanareo bebe kokoa. Fa fantatrareo ny didy nomenay anareo avy tamin’i Jesosy Tompo. Fa izao no sitrapon’Andriamanitra, dia ny hanamasinana anareo, hifadianareo ny fijangajangana, mba samy hahafantatra izay hahazoanareo ny fanaky ny tenanareo avy, amin’ny fahamasinana sy ny voninahitra, tsy amin’ny filàna fotsiny, tahaka ny jentilisa izay tsy mahalala an’Andriamanitra, mba tsy hisy hanao saina hifetsy ny rahalahiny amin’izany [Na: amin’ny raharaha] ; fa ny Tompo no mpamaly ny amin’izany zavatra rehetra izany, toy ny nolazainay sy nambaranay taminareo rahateo. Fa Andriamanitra tsy niantso antsika ho amin’ny fahalotoana, fa amin’ny fahamasinana. Koa izay mandà, dia tsy olona no laviny, fa Andriamanitra, Izay manome anareo ny Fanahiny Masina. Fa ny amin’ny fifankatiavan’ny mpirahalahy, dia tsy misy tokony hosoratako aminareo, satria ny tenanareo dia ampianarin’Andriamanitra hifankatia. Fa manao izany ihany hianareo amin’ny rahalahy rehetra eran’i Makedonia; nefa mananatra anareo ihany izahay, ry rahalahy, mba hitombo bebe kokoa, ary mba hokendrenareo ny ho tafatoetra tsara sy hitandrina ny raharahanareo ary hiasa amin’ny tananareo araka ny nandidianay anareo, mba handehananareo amin’izay fitondran-tena mahamendrika amin’ny eo ivelany, ary mba tsy hanan-java-mahory hianareo." 1 Tesaloniana 4:1-12
Fitondrantena mahafaly an’Andriamanitra (1-8). Miseho amin’ny fahamasinana ny finoan’ny Tesalonianina izay miorina amin’ny Tenin’Andriamanitra, ary ankasitrahany izany. Mamporisika azy ireo hitombo amin’izany i Paoly, amin’ny fitehirizana ny tena ho madio, lavitry ny fijangajangana (3-4) sy hifanaja (6). Ny kristianina rehetra dia tokony hanaraka izany fitsipi-pitondrantena izany. Ny voa no amantarana ny hazo, dia toy izany koa, ny fitondrantena mendrika no manamarina ny finoantsika. Fa satria «isika no fanasin’ny tany», tokony hahatonga saina ny olona miaina ao anaty faharatsiana ny fitondrantenantsika. Mamita-tena ny kristiana izay faly milona ao anaty fahotana, satria izay mandà izao fampianarana izao dia mandà an’Andriamanitra (8).
Ny firahalahiana (9-12). Tsy ny habetsahan’ny toriteny na fahagagana ataontsika no maneho ny maha-kristiana antsika eo anatrehan’izao tontolo izao, fa araka ny nampianarin’i Jesosy fahizay hoe: ny fifankatiavana. Inona ireo fepetra telo ambaran’i Paoly mba hahatanteraka ny firahalahiana? Ny fikatsahana ny fihavanana, ny asa ary ny fitandremana ny raharahan’ny tena. Mampalahelo fa lasa toeran’ny kamo sy ireo miandry mandrakariva ny fitseran’ny hafa ny fiangonana kristianina, izay misy mihitsy mivelona amin’ny fanambakana ny hafa. Matetika ireny olona kamo ireny ihany no manaratsy, mifosafosa sy manely tsaho, izay manimba ny firahalahiana.
Hosaintsainina: Dinihinao sy ampi-harinao ve ireo fampianaran’ny Tenin’Andriamanitra momba ny fitondrantena kristiana, sa mijanona ho fahalalana fotsiny ihany?